लस एन्जलस क्लब जाने तयारीमा ग्यारेथ बेल !
एजेन्सी । रियल मड्रिडसँगको सम्झौता सकिएसँगै स्टार खेलाडी ग्यारेथ बेल फ्रि ट्रान्सफरमा कुन क्लबमा जालान् भन्ने चर्चा रहेको थियो । रिपोर्टका अनुसार बेल अमेरिकाको एमएलएस क्लब लस एन्जलस एफसीमा अनुबन्ध हुने भएका छन् ।
रोनाल्डो चेल्सी जान सक्ने !
एजेन्सी । म्यानचेस्टर युनाइटेडका स्टार खेलाडी हुन् क्रिस्टियानो रोनाल्डो । गएको सिजन शिर्ष चारमा म्यानुले स्थान बनाउन सकेन । सोही कारण पनि रोनाल्डोले क्लब छोड्ने वा नछोड्नेबारे प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
स्कटल्याण्ड र नामिबिया सिरिजका लागि सन्दीपको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा
काठमाडौं । आईसीसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत स्कटल्याण्डमा हुने सिरिज र क्यानडामा हुने दुई एकदिवसीय अभ्यास सिरिजका लागि नेपाल टोलीको घोषणा गरिएको छ ।
पोखरा । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा यही असार १८ गते पोखरामा हुन लागेको छैटौँ संस्करणको ‘पोखरा स्पोटर्स अवार्ड–२०७८’ को मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ ।
नवनिर्वाचित एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङलाई एएफसी अध्यक्षले बधाई दिए
काठमाडौँ। एशियाली फुटबल महासंघका सलमान बिन इब्राहिम अल खलिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङलाई बधाई दिएका छन्। खलिफले शुक्रबार एक पत्र पठाई अध्यक्ष नेम्वाङलाई बधाई दिएका हुन्।
वर्षा बाधकः नेपाल एसिया कप छनोट हुन सकेन, युएई फाइनलमा
मलेसियामा जारी एसीसी महिला टी–२० च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाल र युएईबीचको पहिलो सेमिफाइल खेल वर्षाका कारण रोकिँदा युएईले फाइनलमा स्थान बनाएको छ ।
वर्षा बाधकः नेपाल र युएईको खेल रोकियो
काठमाडौं । मलेसियामा जारी एसीसी महिला टी–२० च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाल र युएईबीचको पहिलो सेमिफाइल खेल वर्षाका कारण रोकिएको छ ।
नेपाललाई युएईले दियो ८२ रनको लक्ष्य
काठमाडौं । एसीसी महिला टी–ट्वान्टी च्याम्पियनसिपको पहिलो सेमिफाइनल अन्तर्गत युएईले नेपाललाई जितका लागि ८२ रनको लक्ष्य दिएको छ ।
एसीसी महिला टी–ट्वान्टीः फाइनल पुग्न नेपालले युएईको सामना गर्दै
काठमाडौं । एसीसी महिला टी–ट्वान्टी च्याम्पियनसिपको पहिलो सेमिफाइनल अन्तर्गत आज शुक्रबार नेपालले युएईको सामना गर्दैछ । मलेसियाको किनरारा ओभलमा नेपाल र युएईबीचको खेल बिहान ८ः१५ बजे सुरु हुनेछ ।
फिफाको वरीयतामा नेपाल आठ स्थान तल झर्यो
काठमाडौँ। नेपाल विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरीयता खस्किएको छ। फिफाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरीयतामा नेपालको वरीयता ८ स्थान लत खस्केको हो। यसअघिको वरीयतामा १६८ औं स्थानमा रहेको नेपाल यस पटकको वरीयतामा नेपाल १७६ औं स्थानमा पुगेको हो।